Viatamin AD ngoba Injection - China Ningbo Okwesibili-hormone okuthiwa i
Ibhukwana Vitamin AD umjovo [Incazelo] Lo mkhiqizo yellow ecacile ketshezi kungekho nto enemibala emihle noma ukukhanya oily. [Umsebenzi futhi Sebenzisa] Lo mkhiqizo iqukethe vitamin A ne D. le uvithamini A usebenze njengoba ekuthuthukiseni ukukhula isilwane, ukugcina umsebenzi evamile kwezicubu EPITHELIAL ezifana isikhumba, conjunctiva, i-cornea kanye nokunye, futhi kuthatha iqhaza zamagama kwamathekisthi abukelwayo onsomi futhi sithuthukisa sensitization ka-retina. Ngaphezu kwalokho, kuthatha iqhaza eziningi gasification emzimbeni, ikakhulukazi ...
Ibhukwana Vitamin AD umjovo
Lo mkhiqizo yellow ecacile ketshezi kungekho nto enemibala emihle noma ukukhanya oily.
[Umsebenzi futhi Sebenzisa]
Lo mkhiqizo iqukethe vitamin A ne D. le uvithamini A usebenze njengoba ekuthuthukiseni ukukhula isilwane, ukugcina umsebenzi evamile kwezicubu EPITHELIAL ezifana isikhumba, conjunctiva, i-cornea kanye nokunye, futhi kuthatha iqhaza synthesis onsomi ezibukwayo futhi sithuthukisa the sensitization ka-retina. Ngaphezu kwalokho, kuthatha iqhaza eziningi gasification emzimbeni, ikakhulukazi gasification ka fattyacid unsaturated. I-vitamin D kakhulu ine umphumela obalulekile umzimba ukhiphe i-calcium ne phosphorus bone ukukhula pup sika, ikakhulu imisebenzi njengoba ekugqugquzeleni ukumuncwa evamile nge-calcium ne phosphorus e emathunjini amancane. Indaba umzimba esebenzayo vitamin D ungalungisa reabsorption-calcium ngu izinso tubules, silondoloze ezingeni le-calcium egazini afundwa, futhi phambili nokukhula okuvamile ithambo.
It is ikakhulukazi esetshenziselwa uvithamini A no-D ukuntuleka kwamavithamini, ukungezwani ezifana ebusuku ubumpumputhe, keratomalacia, dermatitis, yamathambo, osteomalacia nokunye.
uyijova esicutshini: eyodwa umthamo owodwa, 5 ~ 10ml ngehhashi nezinkomo; 2-4ml ngoba ithole, inkonyane, izimvu ezingulubeni; 0.5-1ml ngewundlu futhi ngengulube.
[ Esibi R eaction ]
Overdose uvithamini A kungabangela toxication. Isilwane ubuthi acute kubonakala njengoba injabulo, ukufiphala umbono, encephaledema, ebuhlanzweni; lo ubuthi okungamahlalakhona obonakala njengenhlangano sokuzincisha ukudla, isikhumba lesion futhi umonakalo viscera nokunye.
Ngokweqile vitamin D kungaba ngokuqondile kuthinte umzimba ukhiphe i-calcium ne phosphorus, ukunciphisa calcification kwethambo, kubangele calcification ethunjini ezicutshini esithambile futhi arrhythmia futhi izinzwa ukungasebenzi kanye nezinye izimpawu.
Ngokweqile vitamin D Ungase futhi ngokungaqondile ziphazamisa umzimba ezinye amavithamini lipid-encibilikayo (ezifana uvithamini A, E and K)
Kuphela ujove esicutshini, ayivunyelwe ukuba Ubephuze.
amayunithi 250 000 Vitamin A namayunithi 250 00 kavithamini D.
Elondolozwe usesimweni moya endaweni mahhala kusuka ukukhanya (ngezansi 30 ℃).
Olandelayo: Chorionic Gonadotrophin ka Injection (hCG)
Viatamin Ad Ukuze ukufakwa